Easy Hide IP v — MYSTERY ZILLION
January 2011 edited January 2011 in File Request
ထားလို့ပါ၊အချို့ကျော်တဲ့ဆိုက်တွေနဲ့ကြည့်ပြန်တော့လည်းကြာလို့ပါကျွန်တော်ဆီမှာ Easy Hide IP v5.0.3.6
software လေးတခုရပါတယ်၊ကျွန်တော်အနေနဲ့သုံးရတာအရမ်းအဆင်ပြေပါတယ်၊ဒါပေမဲ့သူက Free သုံးရက်
SN key ကိုလိုက်ရှာပြီးပါပြီဘယ်လိုမှလည်းမတွေ့ပါဘူးခင်ဗျား။
အကယ်ရွှေ့များ Easy Hide IP v5.0.3.6 ရဲ့ SN key သုံးလို့ရတဲ့key လေးရှိရင်မျှေ၀ပေးပါလို့အနူးအညွတ်
heronaing wrote: »
တွေ့သလောက် ပေးလိုက်ပါတယ်..။ အသုံးတည့်ပါစေဗျာ..။
ဖြေကြားပေးတဲ့ kaungkimpyar123 နဲ့ Computer Workstation ကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျား။
ဒါပေမဲ့အကိုတို့ပေးလိုက်တဲ့ software ကသွင်းလို့ရတယ်ခင်ဗျား မ၀ယ်ခိုင်းတော့ဘူးဒါပေမဲ့သုံးလို့မလွယ်
Easy Hide IP v3.7.4 ရဲ့ှSN key လေးကိုသိချင်ပါတယ်။
ကျွန်တော် Easy Hide IP v3.7.4 ကိုဆွဲပြီးပါပြီ
SN key ကိုသိရင်သုံးလို့ရပါပြီ
your-freedom ပါဒါပေမဲ့အရမ်းလေးပါတယ်၊ web တခုကြည့်ဖို့ဆယ်မိနစ်လောက်ထိုင်စောင့်နေရပါတယ်
ကျော်ခွချင်တယ်ဆိုတော့ . .ဘယ်လိုင်းသုံးသလဲဗျ. . ဆိုလိုတာက MPT လား ရတနာပုံ လား . .. ရတာပုံဆိုရင် တော့ proxy နဲ့ကျော်သုံးလို့ရတယ်လေ . . .
Easy Hide IP ကိုဘယ်လိုသုံးရပါသလဲ? နည်းနည်းရှင်းပြပေးကြပါခင်ဗျာ....။ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်...။
ကျနော်တို့ ကိုယ်ပိုင်အင်တာနက်မသုံးနိုင်တော့ အင်တာနက်ကို ဆိုင်တွေမှာ သုံးရတယ်။ ပုံမှန်လိုလိုသုံးနေတဲ့ဆိုင်တွေလည်းရှိတာပေါ့။ အဲဒါ ip hide version တစ်ခုခုပေါ့ portable ပေါ့ဗျာ။ အဲဒါ ရှိနိုင်မလား ရနိုင်မလား။ ပြီးေတော့ အင်တာနက်ဆိုင်မှာ သုံးလို့ရော ထိရောက်အသုံး၀င်မလားသိချင်ပါတယ်။
Easy Hide IP 4.2.4.6 full Patch